Lenye yetinhlelo kangcono ukuthuthukiswa yokufunda. Esinye salezo izinhlelo lapho abaningi bethu bakhula. "MythBusters" abantu abaningi baye wanginika uthando ukuze sciences ngqo: kusukela izibalo, i-physics langesikhatheso ngoKukhulamungu. Kuyo yonke le minyaka, kuphrojekthi ukuthi nje awaveli, ngalokho esakwenza ayiqhutshelwa phezulu ezimbili ngendlela yokusangana, kuphela ukuze uthole imiphumela. Kodwa njengoba wazi, emhlabeni ukuphela kwalo.
Ngo-2016, ukutholakala umise izibukeli uwusekela phambi yokuthi: "MythBusters" ivaliwe. Kungani kwenzekile - akekho wachaza.
Ekuqaleni, kudlulisela ahlinzekwa omunye usithe iziteshi umkhiqizi uPetru Ilayisi. Umbono wakhe elilula: zonke ezaziwayo izitatimende, izindaba, amahemuhemu, inhlebo kanye izinganekwane, uhamba phakathi kwabantu ne-Internet, ayahlolwa ngochwepheshe ngosizo ucwaningo lwesayensi. Okokuqala, chaza lo mshini wezenzo kwanoma yiliphi isu, bese ukudala izimo lapho ukuhlolwa langempela into ethile. Empeleni, isithakazelo umbukeli, uPetru Ilayisi kwaba kuphela 3 umshayeli ukukhululwa, ngemva kwalokho ngempumelelo umkhankaso uhlelo "MythBusters." Ukutholwa siteshi ithuba ukuba lo mdlalo we omangalisayo.
Peter Ilayisi ubanjwe ngesikhathi Haynemenom Jamie, abake okwaxoxwa. kuJobe ukuthi ukuziqambela imiphumela ekhethekile, futhi kulo mkhakha ayeyisebenzela ende sikhathi, ulwazi nokuhlangenwe nakho ukuze afeze izinhlobo ezahlukene ukuhlolwa ayenakho ngokwanele. Kodwa njengoba wazi, enye inhloko muhle, kodwa ezimbili - kangcono: Jamie wanquma ukuthi ngokwanele onekhono futhi bejabule ukuhola lolu hlelo kuphela, ngakho-ke, umenywa ukuba umngane wakhe - Adamu Seyvidzha. Iminyaka 14, ukusakaza ehola awushintshanga, futhi kwakubonakala sengathi umbuzo lapho umbukiso iphelile, akufanele kube khona, ngoba kudlulisela ingenye eside egijima kakhulu emlandweni ithelevishini. Manje zonke ukunwaya amakhanda abo phezu kungani shaqa uhlelo "MythBusters."
Yiqiniso, abantu ababili asikwazi ukumelana nokushintsha kwamandla kwakuzowunciphisa esindayo, ngaphezu, umbukiso wonke ukukhishwa ozama ukwenza okungcono ukuzijabulisa kungenzeka, ngakho kukhona lonke iqembu labasizi nokubambisana abethuli, abasebenza ku iphrojekthi yabo ehambisana ekuholeni. Ithimba labantu abathathu zezinkathi eziningana wathatha phezu imisebenzi elula, ekubhekaneni Ukucaciswa ukuxegiselwa.
kwamenyezelwa ngo-2016 ukuthi "Mythbusters" ivaliwe. Kungani kwenzekile - isikhathi esiningi udinga ube nentshisekelo abameleli Discovery Channel. Futhi ngenkathi Jamie ngokudabukisayo uyakhumbula iqhaza lakhe kule projekthi, nokuphila elaliphambi kwakhe. Waba amarobhothi ukuze "Izimpi Star", iqhaza kudalwa uhlelo "Robot Izimpi," benza imiphumela esikhethekile "The Matrix", kodwa lapho kufika "Abacekeli" ngaso sonke isikhathi wabanika.
Phakathi khona ukundlulisa babe ingqikithi:
ihlolwe ezingaphezu kuka 920 izinganekwane;
lwenziwa 2590 ucwaningo;
It ethumba 14 zonyaka zohlelo iminyaka engu-13;
Yathela 900 ukuqhuma;
wathwebula 248 iziqephu.
umqondo ukudluliswa ulula: sibekwa isikhathi isikhathi esingangehora, udinga indlela yokulinga ukufakazela noma siphikise inganekwane ethize. Ngokuvamile, ukuhlola ezihlukahlukene amahemuhemu, u-Adamu no Jamie bamenywa ukuba uchwepheshe walo ensimini efanele.
Zonke izinhlelo ze-show out sibonga umbukwane, futhi okuthakazelisayo kubantu uthando yokuqhuma, izikhali, engozini. Ngokuvamile abahlanganyeli wathola imihuzukwana. Kodwa inqubomgomo Uhlelo ukuzijabulisa wukuthi ucwaningo kungukuthi kwenziwe uma kukhona ukuphila engozini ezimpilweni zabantu nezilwane.
Kusukela kuqala inkinga lokugcina
Ukuze 14 zonyaka, abadali ehola futhi kwalondolozwa izinkumbulo eziningi zohlelo. Futhi bona ngokwabo baye baba ezidumile emhlabeni wonke - ososayensi baleen ukwazi bonke abantu, okungenani kanye wabheka Ukutholwa. Uma uhlelo lokuqala Adamu noJamie ikakhulu ngabodwana, ngokuvamile esebenza njenge sivivinyo ke ngokuhamba kwesikhathi kwangena i team abanolwazi wabantu abangaba ukwandisa izinga umbukiso.
Embikweni owakhishwa Uhlelo umshayeli Jamie no-Adamu kuthathe into yokuqala kuyinto inganekwane ezivamile mayelana nokusetshenziswa 'Cola Cola "lihambisana namanye imikhiqizo ngomzamo kuqhunyiswa eziswini zabo ngaphandle. Lapho uhlelo senza, ukucwaninga isimo saba sibi kakhulu. Bashaya up zangasese, ixoshe kusuka izibhamu, wazama ukwenza big bang, futhi konke - "MythBusters." Isizini 1 Isiqephu 1 kwaba isiqalo impilo entsha nejabulisayo balaba bantu.
Ikhono bahlekise kahle, omunye phezu komunye okwenza lolu hlelo yesayensi mnandi futhi bezijabulisa, futhi ekugcineni ayelapho ezintathu nashayela: Grant Imahara - onguchwepheshe emkhakheni wamarobhothi, Tori Bellechi - Model Umklami for ifilimu futhi Kari Byron - umculi. Yibona ababe ngokwami ukusiza ososayensi ababili ukwazi.
Esikhathini isiqephu sokugcina, u-Adamu no Jamie waphinda ngisele ngedwa, kodwa nomklamo walesi akusho noma zizoba zimbi kakhulu they are eqinisweni njengoba izinga okusezingeni baqhubeka ekuphikiseni noma uqinisekise izinganekwane. Eza nezindlela ezingcono ukushaya up yini uhlelo "MythBusters." Isizini kokugcina wethulwa izilaleli Januwari 9, 2016. Ekulandiseni kwakhe Twitter, u-Adamu okukhulunywa ukuthi bazophinde ukubhubhisa izinganekwane kusuka imikhakha ehlukene 13, bathembisa izilaleli "alufakwa" ukuvalelisa okuthatha ngempela. Wachaza nokuthi wazisola kakhulu ukusho goodbye kuya uchungechunge TV basazikhumbula uyakhumbula indlela wathwebula "MythBusters." Isizini 1 Isiqephu 1 - isibe isiqalo grand futhi kuphumelele.
Kungani ikhava Uhlelo
Ngo-2016, ukutholakala Channel wamemezela ukuthi ngesizini ezayo kuyoba ukuba "Mythbusters" zokugcina. Yiqiniso, abalandeli (nezinhlelo zabo ngesikhathi sokusakaza kwaba eningi), ahlubuka ehlubukile, futhi ngokushesha kwaba khona nesethi yemibuzo: "MythBusters" vala - kungani? Kanjani? Ngoba kwenzenjani? Futhi ziyini izizathu? Yiqiniso, Discovery Channel ngeke asinikeza impendulo ecacile yalo mbuzo, kodwa ungacabanga ngokuphepha ukuthi manje umbukiso isibe akusebenzi futhi izinganekwane ezintsha abanawo imibono. Ekugcineni, manje noma ngokuhamba kwesikhathi uma isiqedile. izizukulwane eziningi wakhulela lolu hlelo ethandwa isayensi, ukuthola izwe kabusha. Isifiso kuphela okuholela umbukiso lalikufanelekela ukuqedela isizini, senza imisebenzi yabo engcono ngaphansi kwegama uyaziqhenya "MythBusters" (isizini yokugcina), ngazo ngempumelelo futhi iphathwe.
Discovery Channel wenqabile ngokuphelele ukuvumela uhlelo, kodwa akusho ukuthi ifile nhlobo. Enye inhlangano ebizwa ngokuthi yi-Science ufuna ukuqhubeka ukudubula iziqephu Mythbusters, kodwa esikhundleni phezulu futhi kancane kokushintsha umqondo show. Ukuze eziningi ezingajabulisi esibhekana nazo kakhulu ukuzwa lezi zindaba: "MythBusters" ivaliwe. Kungani? Buza lutho, kodwa esikhundleni salokho kungcono ukuze uqhubeke.
U-Adamu no Jamie, ziphethe umbukiso, wayiswa kwelinye project futhi manje isebenza kuchungechunge mayelana ososayensi. Mhlawumbe izibukeli eziningi izigcawu umbukwane ukuqhuma ozithandayo ehamba phambili.
Kepha Ya empumelelweni bese uhlala, Kari futhi Grant - abakuhlakulelayo uhlelo olusha ngakolunye isiteshi, futhi ngokushesha kuyophuma egameni elilodwa ngaphezulu igiya kwawo kwezesayensi, hhayi kokuba Nokho, ubuhlobo izinganekwane.
Veronica Itskovich. ukuphila komuntu siqu, izindima movie.
"Roundup" futhi "Ground" ukhula: zokubuyekeza komsebenzisi